Maraykanka oo ka Walaacsan Kaalmada dhaqaale uu siiyo Somaliya inay u Gacan Gasho Alshabaab – Radio Daljir
Maraykanka oo ka Walaacsan Kaalmada dhaqaale uu siiyo Somaliya inay u Gacan Gasho Alshabaab
Noofember 3, 2017 9:50 b 0
Laanta dabagalka gargaarka Mareykanka ee dibadda ayaa shaki ka muujisay sugnaanta gargaarka Mareykanka siiyo Soomaaliya in uu gaaro gacmaha loogu talagalay.
Waaxda la socodka Gargaarka Mareykanka ee dibadda ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo laamaha hoostaga uga digtay in waxdaas ay shaki ka qabto in gargaarka Mareykanka ee Soomaaliya uu si dadban ku gaaro Al-shabaab.
Laantaan,waxaa ay ka walaacsan tahay sababta aysan u soo laaban warbixinnada la xiriira kaalmada Mareykanka ee Soomaaliya iyada oo aan laheyn warbixin celinta sida loo bixiyay kaalmada Mareykanka ee Soomaaliya,cidda qaadatay oo aan la caddeyn iyo sababaha ay ku baxaan oo aan soo laaban.
Warbixintan oo ka kooban 34 Bog,ayaa waxaa sidoo kale kula jira Kaalmada Mareykanka ee Nigeria oo iyana la tuhmayo in ay si dadban u gaarto Boko Haram.
Laanta daba gasha gargaarka dibadda ee Mareykanka ayaa tusaale u soo qaadatay $66 Milyan oo uu mareykanka ku bixiyay Ciidanka Milatariga Soomaaliya,7dii Sano ee la soo dhaafay,taas oo aan xisaab celinteeda lahayn.
Madaxweynaha Puntland oo Si Kumeel Gaar Ah Degmada Bursaalax Ugu Magacaabay Guddoomiye Iyo Guddoomiye Ku-xigeen.
Xildhibaano Katirsan Maamulka Koonfur Galbeed oo Mooshin ka Gudbiyeey Shariif Xasan